Featured – Page 11 – BIG FM 101.2 MHz
जंगल फेस्टिभलमा दर्शक थामिनसक्नु, जंगलभित्र रेस्लिङ खेल्न मंगलबार आउँदैछ भारतीय टोली
रेम बिक पोखरा, १६ फागुन । पोखरा शान्तिवन वाटिकामा जारी तेस्रो सँस्करणको जंगल फेस्टिभलमा दर्शक सँख्या ह्वात्तै बढेको छ । निरन्तर परेको बिदा र बलियो ‘वर्ड अफ माउथ’को प्रभावले फेस्टिभलमा दर्शकको सँख्या निकै बढेको आयोजकले अनुमान लगाएको छ । आयोजक परिचय नेपालका अनुसार अघिल्ला सँस्करणको अनुभवमा जंगल फेस्टिभलमा अहिले देखिएको दर्शकको भीड अहिलेसम्मकै सर्वाधिक हो । एकै प्रकारका मेला महोत्सवले …
जंगलमा ओईरिँदै दर्शक, आइतबार जंगलभित्र दिपक र दीपाको हाँस्य प्रस्तुती
रेम बिक पोखरा, १४ फागुन । जंगल फेस्टिभलमा आउने दर्शकको सँख्या निकै बढ्दै गएको छ । सकारात्मक ‘माउथ पब्लिसिटि’ र बिदाको दिन परेकोले शनिबार फेस्टिभलमा दर्शकको संख्या निकै बाक्लो देखिएको आयोजकले बताएको छ । ‘शनिबार देखिएको दर्शकको सँख्या ऐतिहासिक हो । तेस्रो सँस्करणसम्म आईपुग्दा यस्तो खाले भीड पहिला कहिल्यै देखिएको थिएन ।’ आयोजक परिचय नेपालका अध्यक्ष सोभित बस्यालले भने–‘जंगलमा देखिएको …
रेम बिक पोखरा, १४ फागुन । उत्कृष्ट १० मा छनौट भएका बिग आइकनका प्रतिस्पर्धीहरुले शनिबार अघिल्लो चरणको लागि आफ्नो प्रस्तुती दिएका छन् । शनिबार प्रस्तुती दिएका १० जनामध्ये एक जना प्रतियोगी बाहिरिने आयोजक बिग एफएमले जनाएको छ । यो पटकबाट निर्णायकको मतसँगै स्रोताको एसएमएस भोटिङले समते मताधिकार राख्ने भएपछि प्रतियोगिताबाट बाहिरिने प्रकृयामा केहि फरक शैली अपनाईएको हो । नयाँ शैली …
जंगल फेस्टिभलमा ‘भूतघर’, शनिबार यस्ता छन् जंगलका आकर्षणहरु !
रेम बिक पोखरा, १४ फागुन । ‘जंगल थिम’ दिएर जंगलभित्रै आयोजना गरिएको जंगल फेस्टिभलको दोस्रो दिन नयाँबजारस्थित शान्ति वन वाटिकामा दर्शकको भीड लाग्यो । जंगल फेस्टिभलमा दर्शक निकै रमाएका देखिन्थे । नयाँ स्वाद र शैलीको यो फेस्टिभलमा दर्शकले फरक अनूभुती गरेको आयोजक परिचय नेपालले जानकारी दिएको छ । शुक्रबार महाशिवरात्रीको विदा परेकोले दर्शकको सँख्या निकै बाक्लो देखिन्थ्यो । विभिन्न मुखुन्डो …
राजामामाले गरे तेस्रो जंगल फेस्टिभलको उद्घाटन, शुक्रबार यस्ता छन् फेस्टिभलका आकर्षणहरु !
रेम बिक पोखरा, १२ फागुन । ‘कुसुन्डा’ जातिको एक मात्र जिवित व्यक्ति ‘राजामामा’ले रिबन काटेर उद्घाटन गरेसँगै तेस्रो जंगल फेस्टिभल शुरु भएको छ । ‘जंगल थिम’ दिएर पोखराको शान्तिवन वाटिकामा विहिबारदेखि शुरु भएको जंगल फेस्टिभलको उद्घाटन गर्दै राजामामाले फेस्टिभलको उद्घाटन गर्न पाउँदा निकै खुशी लागेको प्रतिक्रिया दिए । ‘पहिला म पनि जंगलकै बास बस्थेँ । जहाँ सुर्य अस्तायो त्यहिँ सुत्यो, …
रेम बिक पोखरा, ८ फागुन । जारी बिग आइकन अन्तरगत आइतबार उत्कृष्ट १२ जना गायन प्रतिभाहरु अघिल्लो चरणका लागि छनौट भएका छन् । उत्कृष्ट १५ प्रतिस्पर्धीमध्ये आइतबारको राउण्डमा तीन जना बाहिरिएपछि प्रतियोगिताले ‘टप १२’ राउण्डमा प्रवेश पाएको हो । आइतबार प्रतियोगिताबाट बाहिरिनेहरुमा राजन आलेमगर, सन्देश बिक र मनोजकुमार पुन रहेका छन् । राजन यो प्रतियोगितामा भाग लिन चितवनको पटिहानीबाट आएका …
सातौं विग आइकनमा टप १५ छानिए, उत्कृष्ट १२ का लागि आइतबार अडिसन हुँदै
Ranjan Adhikari Chhetri Featured, बिग समाचार
नवराज ढुङ्गाना/पोखरा, ६ फागुन- सातौँ चरणको बिग आइकन अन्तर्गत शुक्रबार उत्कृष्ट १५ जना छानिएका छन् । उत्कृष्ट २० गायन प्रतिभाहरुबीचको प्रतिस्पर्धाबाट शुक्रबार ५ जना बाहिरिएपछि प्रतियोगितामा अब १५ जना प्रतिस्पर्धी बाँकी रहेका हुन् । प्रतियोगिताबाट बाहिरिनेमा एम डि काफ्ले, सौरभ केसी, जुना पुन, राजु लिम्बु र उमाकुमारी चौधरी रहेका छन् । यसअघि उत्कृष्ट २५ मध्येबाट पनि ५ जना बाहिरिएका थिए …
रिया र मनोजको जोडी बने ‘बेस्ट भ्यालेन्टाइन कपल’
नवराज ढुङ्गाना पोखरा, ३ फागुन- पश्चिमाञ्चलकै नम्बर वान एफएम बिग एफएमले सञ्चालन गरेको रेडियो गेम शो ‘बेस्ट भ्यालेन्टाइन कपल’ अन्तर्गत रिया पुन र मनोज गुरुङको जोडी सर्वोत्कृष्ट बनेको छ । प्रणय दिवस अर्थात् भ्यालेन्टाइन डे को अवसरमा एफएमले हरेक दिन छानिएका १० जोडीमध्ये मङ्गलबार उत्कृष्ट जोडी घोषित गरेको हो । सर्वोत्कृष्ट बनेको जोडीले नगद १५ हजार रुपैयाँ सहित भ्यालेन्टाईन स्पेशल …